Zoputa $ 50 na ahia giProfs PRO ndi otu | Martech Zone
Chekwaa $ 50 na Ahịa gịProfs PRO
Saturday, January 5, 2013 Saturday, January 5, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’ịpụtabeghị ụfọdụ uru na usoro ịtụnanya dị na ya AzụmaahịaProfs, ị kwesịrị n'ezie. Ruo ihe karịrị afọ 10, MarketingProfs egosiputa ndị ọkachamara ihe na - arụ ọrụ - yana ihe anaghị arụ ọrụ - n’ọma ahịa taa.
Ndị bụ isi gụnyere iso nweta ọbá akwụkwọ bara ụba nke akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ. Onye otu PRO na-agbakwunye otu esi seminarị, dị mkpirikpi Were webcasts 10, na-akpali akpali nchịkọta ọmụmụ ihe, SmartTools nwere aka, na ndị ọzọ. Soro taa, ma mụta ihe kpatara ndị ọkachamara 492,000 ji adabere na MarketingProfs iji nyere ha aka iwulite mmemme ahịa na-arụ ọrụ.
Sonye taa eji koodu dere DKVIP ma ị ga-enweta $ 50 nke PRO ndị otu na-efu $ 279!
Ntaneti juputara na ahia ahia, ndumodu ahia, na ndi okacha mara ahia-mana otutu ihe di na ya bu ma obu ahihia mkpofu ma obu ihe nzuzu ichota. Ndị otu ndị na - ede akwụkwọ na MarketingProfs gafere mkpọtụ ahịa a niile iji chọta ndị ọkachamara na ndị na - azụ ahịa maara ihe ha na - ekwu. Ha na ama ihe ha ma tinye ya na smarts ahia ha iji mee ka o buru ntuziaka bara uru nke ị nwere ike iji n'ezie site na akwụkwọ akụkọ anyị, nzukọ, nzukọ ọmụmụ, pọdkastị, isiokwu, na webcasts.
Ha aghaghi ime ya nke oma, ha bu ulo oru otutu nde dollar nke na-aru oru ndi mmadu kariri ndi oru 492,000, ndi nwere obere ahia, na ndi ahia ahia na ulo oru kachasi elu nke uwa.
Tags: discountahia ahiaotu na-
A Unique Business Kaadị hipgbawa
Ikwughachi: Na-ewepụta Ọdịmma Ka Mma Karịsịa